Lady B - Maya Angelou - AFRIKHEPRI
Ny fampiharana Android dia hanome ny Rwandans malalaka amin'ny alàlan'ny boky 500
ny talata, jona 4, 2020
DNy volan'ny tantaran'ny Maya Angelou, mpanoratra sy mpikatroka afrikanina-Amerikana, izay nivoaka tao Frantsa volana vitsivitsy taorian'ny nahafatesany, i Lady B dia fanambarana mahafinaritra ho an'ny reniny. Nolazain'i Maya Angelou ny fiainany niavaka sy ny dia tsy mahazatra tao amin'ny autobiographie revolisionera.
Nodinihina androany ho toy ny sokajy ho an'ny literatiora Afrikana-Amerikana (amin'ny volan'ny 6, 4 dia nadika tamin'ny teny frantsay: Fantatro hoe nahoana no mihira ny vorona ao anaty tranom-boronaRaha mbola mainty aho, Taratra fiaramanidina mankany Afrika ary Lady B), ny asa sorany dia nanitatra ny fizotry ny fahatsiarovan'ny tarika amerikana.
Maya Angelou sy ny reniny, Vivian Baxter.
"Matetika ny olona manontany ahy ny fomba lasa aho hoe iza moa aho. Ahoana no teraka fotsy mainty kolontsaina, mahantra ao anatinà fiarahamonina izay harena no hoderaina ka nitady na oviana na vidiny, ny vehivavy tao amin'ny tontolo izay vitsivitsy monja fanaka lehibe sy ny locomotives dia tendren'ny tsara noho ny fampiasana ny mpisolo-SAMPA tsy ampy, ahoana no Lasa i Maya Angelou aho? (Lady B, p.9).
Lady B, ny reniny, dia mamaly ny fanontaniana lehibe indrindra. Ny fitiavana Vivian Baxter "nisy fiantraikany, miendrika, mahazo vahana." Ao amin'io tantara farany, ny mpanoratra, antitra nandritra ny folo taona ny reny renibeny any Arkansas sy ny rahalahiny, dia milaza ny efa za-draharaha toy ny fandaozana sy ny lavitra mankany amin'ny fampihavanana miaraka amin'ny vehivavy sitrana taona ny taona 13.
Avy amin'ny anekdotes ho an'ny anekdotes, avy amin'ny penifony manify sy mamolavola azy, Maya Angelou mampihetsi-po ny fahatsapana fitiavana eo amin'izy ireo ary mampiavaka azy ny fahombiazany. Satria izy io Lady B, io vehivavy io manana hatsarana mamirapiratra ary malala-tanana izay tsy afaka miantso an'i Neny, izay ho avy rehefa hanan-janaka lahy amin'ny taona 17 i Maya na hanomboka hanoratra izy.
Ho an'ny reny amin'ny zanaka vavy, ny fitiavana dia hanampy "hahatratra ny haavon'ny tsy eritreretina ary hianika avy amin'ny lavaka tsy hita fetra".
Ny horonantsary vao nivoaka nivoaka vao haingana "Harlem Hopscotch" any Etazonia dia nandefa tononkalon'i Maya Angelou.
Maya Angelou, olo-malaza momba ny zo sivily ho an'ny mainty hoditra
Mpanoratra, poeta, mpilalao sarimihetsika, mpandihy ary mpampianatra, Maya Angelou dia singa manan-danja ao amin'ny Hetsika Faneriterena ho an'ny Hetsika.
Teraka tao amin'ny 1928 tao Saint Louis ary nibata amin'ny Stamps any Arkansas, faritra atsimo atsimo, Maya Angelou Manomboka ny fanavakavahana noho ny fanavakavaham-bolon-koditra ao amin'ny boky voalohany momba ny autobiografy izay fantatro hoe nahoana ilay vorona no mihira ao anaty tranom-biby (1969). Izany dia hanohy hiady amin'ny fitondrana tsy fitoviana amin'ny tany.
Raha mbola mainty aho (1981), dia milaza ny fomba niaraka Harlem izy ivon'ny asa ara-tsaina ny Black Amerikana sy ny fivoriana miaraka amin'ny Afrika Atsimo Vusumzi ho mafana fo, akaiky an'i Nelson Mandela, dia ho tonga ny mpiara-mitory. Koa mamehy amin'ny Malcolm X sy Martin Luther King. Izy ihany koa no hitarika ny New York sampan 'ny fikambanana ny farany. Izany dia ny fahafatesany fa nanomboka nanoratra, Nanosika ny mpanoratra James Baldwin. Nandritra ny taona maro, Maya Angelou dia lasa olo-malaza manan-danja eo amin'ny fiainana sy ny kanto politika Amerikana.
Tao amin'ny 2010, Barack Obama dia nanome azy ny Medaly ny Fahafahana ho an'ny Fahafahana, ny voninahitry sivily avo indrindra any Etazonia. Ao amin'ny 2013, izy dia mandray ny National Book Foundation ho "asa fanompoana miavaka amin'ny fiarahamonina amerikana." Maty tamin'ny volana 2014 izy.
Raha mbola mainty aho
7,90€ ao amin'ny staoky
5 vaovao manomboka amin'ny 7,90 €
4 avy amin'ny € 9,37
tamin'ny 4 Jona 2020 10:35
Daty namoahana 2009-09-30T00:00:01Z
Isan'ny Pages 409
Fahalalahana: Tantara mikasika ny ady ataon'ny Amerikanina mainty (Boky)
Tantaran'i Afrika (Volume 6)
Ny hatsaram-panahy an'ny hibiscus sy okra
Hery - vanim-potoana feno 1 ka hatramin'ny 3 [DVD + dika dika nomerika]
Mampihatra ny herin'ny fotoana ankehitriny: fampianarana manan-danja, fisaintsainana ary ...
Ny tsiambaratelo lehibe indrindra, boky 1